Rasburicase - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Rasburicase
Generic Name: Rasburicase Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Rasburicase ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Rasburicaseကို(leukemia, lymphoma, solid malignant tumorsစသည့်)ကင်ဆာဖြစ်နေသောကလေးများ၌ ကင်ဆာဆေးမသွင်းမှီသွေးတွင်း Uric acid များခြင်းအားကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ကင်ဆာဆေးသွင်းသည့်အခါ ကင်ဆာဆဲလ်များကိုဖျက်စီးလိုက်ပြီး Uric acid များစွာသွေးထဲသို့ ဝင်လာကြ၏။ ဤဆေးက Uric acid များကိုကျောက်ကပ်မှတစ်ဆင့် ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းမှစွန့်ပစ်ရာတွင် လွယ်ကူအောင် ကူညီပေးပါသည်။
ဤဆေးကိုသွေးကြောထဲသို့ မိနစ် ၃၀ ကြာအောင် သွင်းရ၏။ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသွင်းရသည်။ Rasburicaseကိုတစ်ရက်တစ်ကြိမ်နှင့် ၅ ရက်ကြာအောင်ပေးရ၏။ ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းနှင့် Rasburicaseပေးခြင်းအားအချိန်ကိုက်အောင်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ များသောအားဖြင့် Rasburicaseပထမအကြိမ်ပြီးနောက် ၄-၂၄ နာရီအတွင်းကင်ဆာဆေးစသွင်းရပါမည်။
Uric acid ပမာဏနည်းစေရန်အတွက် ဤဆေးကိုအရည်များများနှင့် တွဲသွင်းလေ့ရှိသည်။
Lyophilized လုပ်ထားသောဆေးများနှင့် ဖျော်ရန်ဆေးများကို2°C to 8°C (36°F to 46°F)တွင်သိုလှောင်ရမည်။ မခဲစေရ။ အလင်းနှင့်မထိအောင် ထားပါ။ ဖျော်ပြီးသားဆေးရည်များ၊ သွင်းရန် ဖျော်ထားသောဆေးများကို2°C to 8°C (36°F to 46°F)အပူချိန်တွင် ၂၄ နာရီထိအောင် ထားနိုင်ပါသည်။ မသုံးတော့သည့်ဆေးကုန်များအားလွှင့်ပစ်ပါ။
Rasburicaseဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Rasburicaseအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Rasburicase အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဤဆေးကိုမသွင်းခင်ဤဆေးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ် တခြားသောဓါတ်မတည့်မှုများရှိပါက ဆရာဝန်ကိုကြိုပြောပါ။ ဤဆေးတွင် သင့်နှင့်ဓါတ်မတည့်နိုင်သည့် inactive ဓါတ်ပစ္စည်းများပါနေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးကိုမသုံးခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်များကို ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အားပြောပြပေးပါ။ အထူးသဖြင့် တစ်ချို့သော Metabolic အခြေအနေများ (G6PD ချို့တဲ့ခြင်း)၊ ဤဆေးကြောင့် ယခင်ကသွေးနီဥများပျက်စီးဖူးခြင်း (ဥပမာ – hemolysis, methemoglobinemia)၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း။
အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးများတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုဖြစ်လွယ်သောကြောင့် သတိထားပြီးသုံးရမည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆေးကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်မှသာသုံးပါ။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများအတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးသည် နို့ရည်ထဲသို့ဖြတ်နိုင်မဖြတ်နိုင် မသိရသေးပါ။ ဤဆေးသောက်နေစဉ် နို့တိုက်ရန် ထောက်ခံချက်ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Rasburicase ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Rasburicase ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အန်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပါးစပ်အနာဖြစ်ခြင်း၊ အကွက်ထခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပျောက်မသွားလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။
ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သောလည်ချောင်းနာခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်းများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။
အားနည်းခြင်း၊ မျက်လုံးနှင့်အရေပြားဝါခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ အရေပြား ပြာခြင်း၊ ညိုမွဲခြင်းစသည်တို့ဖြစ်လာပါကဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူရမည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Rasburicase နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဤဆေးနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သောဆေးကုန်မှာ Allopurinol ဖြစ်သည်။
ဤဆေးသည် သွေးနမူနာထည့်ထားသောပြွန်များကို အခန်းတွင်းအပူချိန်တွင်ထားပါက Uric acid ပမာဏကိုအနှောက်အယှက်ပေးနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် Uric acid ရလဒ်များမှားသွားနိုင်သည်။ ဓါတ်ခွဲဝန်ထမ်းများက သွေးနမူနာယူရာတွင် အထူးလုပ်ထုံးများအားလိုက်နာရပါမည်။
Rasburicaseသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Rasburicase နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Rasburicase က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Rasburicase နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Rasburicaseသည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Rasburicase ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
0.2 mg/kg နှုန်းနှင့် မိနစ် ၃၀ အကြာအကြောဆေးသွင်းပြီးတစ်ရက်တစ်ကြိမ်ကို ၅ ရက်အထိပေးရမည်။
– ၅ ရက်ထက်ပိုပေးခြင်းသို့မဟုတ် ကုသမှု ၁ ခေါက်ထက်ပိုပေးခြင်းကိုမထောက်ခံထားပါ။
– ပေးရမည့်ကာလအတိအကျကိုသွေးတွင်းမှ Uric acid လယ်ဗယ်နှင့် လူနာအခြေအနေအလိုက် ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။
အသုံး: leukemia, lymphoma, နှင့် solid tumor malignanciesလူနာများတွင် ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီးအကျိတ်ဆဲလ်များသေဆုံးကာ Uric acid များထွက်လာမည်ဟုမျှော်မှန်းပြီး Uric acid လယ်ဗယ်ကိုစီမံရာတွင် ကနဦးအနေနှင့်သုံးသည်။
အပြင်းအထန်ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ သွေးဆဲလ်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ် methemoglobinemiaရလာသောလူများ:ဆေးကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးတစ်သက်တာထပ်မသုံးရပါ။
– အကြောဆေးအနေနှင့်ပေးရမည်။ IV Bolus အနေဖြင့်မပေးရ။
– ဆေးသွင်းတိုင်း ၃၀ မိနစ်ကြာအောင် တစ်နေရာစီမှသွင်းပါ သို့မဟုတ်ပါကဆေးမသွင်းမီနှင့်သွင်းပြီးနောက် ဆလိုင်းရည် 15 mL ကိုအရင်ထိုးလိုက်ပါ။
– ဆေးသွင်းနေစဉ် Filters များမသုံးပါနှင့်။
– ဆေးမဖျော်ခင် lyophilizedလုပ်ထားသောဆေးကုန်များနှင့် ဖျော်ရည်များကို 2C to 8C (36F to 46F) တွင်ထားပါ။ နေရောက်နှင့်မထိစေရ။ အေးခဲအောင်မလုပ်ရ။
– ချက်ချင်းသုံးပါ။ ဖျော်ပြီးစပ်ပြီးသာဆေးရည်များကို2C to 8Cတွင်ထားပါက ၂၄ နာရီအထိသာအထားခံပါသည်။
– ပေးထားသော Diluent နှင့်သာဖျော်ရမည်။
– 1.5 mg ပါ ဆေးပုလင်းကိုDiluent 1 mL နှင့် ဖျော်ပါ။ 7.5 mg ပါ ဆေးပုလင်းကို Diluent5mL နှင့် ဖျော်ပါ။
– ပုလင်းကိုအသာလေးဝိုင်းပေးပါ။ လှုပ်ခါခြင်းရမ်းခြင်းများမပြုလုပ်ရ။ အမှုန်မပါ အရောင်မဲ့ အကြည်ဆေးရည်ကိုသာသုံးရမည်။ တစ်ခုခုပါနေပါကလွှင့်ပစ်ပါ။
– နောက်ဆုံးအရည်ပမာဏ 50 mL ရအောင် ဆေးသွင်းအိတ်ထဲသို့ 0.9% ဆလိုင်းနှင့် ရောစပ်ရမည်။
– ဆေးဖျော်စဉ် သို့မဟုတ် ဆေးသွင်းစဉ် အရည်စစ်သည့်အရာများကိုမသုံးရပါ။
– – ဆေးသွင်းတိုင်း ၃၀ မိနစ်ကြာအောင် တစ်နေရာစီမှသွင်းပါ သို့မဟုတ်ပါကဆေးမသွင်းမီနှင့်သွင်းပြီးနောက် ဆလိုင်းရည် 15 mL ကိုအရင်ထိုးလိုက်ပါ။
– ဂလူးကို့စ်ပါသောအရည်များသည် ဆေးနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သောကြောင့် မသုံးပါနှင့်။
– ဆေးသွင်းရာတွင် သွေးကင်ဆာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သာ ပြုလုပ်ရမည်။
– စိတ်ချရမှုနှင့် အာနိသင်ရှိမှုတို့ကိုထုတ်ပြန်ထားသည်မှာပထမတစ်ခေါက် ကုသမှုအတွက်သာဖြစ်သည်။
– Uric acid လယ်ဗယ်ကိုစောင့်ကြည့်ရမည်။ ဤဆေးသည် သွေးနမူနာများကိုအခန်းတွင်းအပူချိန်တွင်ထားပါက uric acid များကိုအင်ဇိုင်းနည်းဖြင့်ဖျက်စီးတတ်သောကြောင့် အဖြေမမှန်မကန်ဖြစ်တတ်ပါသည်။
– လူနာများကိုဓါတ်မတည့်နိုင်သည့်အကြောင်းဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများဖြစ်သောလေပြွန်ကျဉ်းခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ အောက်စီဂျင်နည်းခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျခြင်းသို့မဟုတ် အင်ပျဉ်ထခြင်းများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချက်အကြောင်းရမည့်အကြောင်းတို့ကိုအသိပေးထားပါ။
ကလေးတွေအတွက် Rasburicase ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Rasburicaseကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Rasburicaseကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Rasburicase Dosage. https://www.drugs.com/dosage/rasburicase.html. Accessed April 12, 2018.
Rasburicase Solution, Reconstituted (Recon Soln). https://www.webmd.com/drugs/2/drug-64024/rasburicase-intravenous/details. Accessed April 12, 2018.